OZI OZI OZI OZI OMA - NA-EGO
Arts ARO ọzọ Ụlọ emekọ NTỤRỤNDỤ AKU NA UBA
Chọpụta ọdịiche dị n'etiti nkụchi obi na ijide obi obi na mberede
Mụta ọdịiche dị n'etiti nkụchi obi na njide ejiri obi mberede Ndị mmadụ na-ejikarị okwu ndị a eme ihe na-ekwesịghị ekwesị, mana ha abụghị otu. Ọrịa obi na-apụta mgbe ọ na-asọ ...
Ndị a bụ ihe ịrịba ama ndị na-ekwuputa ịhụ nsọ ọhụụ nke ndụ a
Ndị a bụ ihe ịrịba ama nke na-ekwuputa nsọ nwanyị na-akwụsị oge ọhụrụ a nke ndụ Anyị niile maara nsọ nwanyị nke bụ njedebe ikpeazụ nke nsọ nwanyị, na-anọchite anya usoro dị mkpa na ndụ nwanyị. Ọ na-apụtakarị ...
China kwuru na ọ bụ mmadụ mbụ bu ọrịa H10N3
China na-akọ akụkọ mmadụ mbụ gbasara ọrịa H10N3 ọrịa China kọọrọ ọrịa mbụ nke ọrịa mmadụ na ọrịa H10N3 nke ọrịa nnụnụ na mpaghara ọwụwa anyanwụ Jiangsu, June 1 kwuru na Tuesday.
WHO na-ebipụta aha ọhụrụ maka ụdị ọrịa dị iche iche
Publistù WHO na-ebipụta aha ọhụrụ maka ụdị ọrịa ahụ Iji zere ihere nke mba ndị ejiri aha ha gosi ụdị dị iche iche nke covid-19, Healthtù Ahụ Ike Worldwa kpebiri ịgbanwe…
"Ọ ga-abụ nnukwu ihie ụzọ ịtụle oria coronavirus ka ọ gafere", ka ...
"Ọ ga-abụ nnukwu ihie ụzọ ịtụle oria coronavirus ka ọ gafere," ka onye isi ọhaneze WHO World Health Director Tedros Adhanom Ghebreyesus si kwuo na ọ ga-abụ "...
Achọpụtara ụdị ọhụrụ nke "ngwakọ" Covid chọpụtara na Vietnam
Ọhụrụ ụdị 'ngwakọ' nke Covid achọpụtara na Vietnam Vietnam achọpụtala ụdị nke Covid nke yiri ka ọ bụ njikọta nke ndị India na ndị Britain dị iche iche wee gbasaa ngwa ngwa site na ...
Ụ mmiri nke ukwuu nwere ike igbu gị; chọpụta ihe kpatara ya
bryanekobe	 Mee 19, 2021 0
Ụ mmiri nke ukwuu nwere ike igbu gị; chọpụta ihe kpatara ya Mgbe ị na-a tooụbiga mmiri ókè, akụrụ gị agaghị enwe ike iwepụbiga ihe ókè. A na-agwakọta sodium dị n’ọbara gị. A na-akpọ nke a hyponatremia na nke a ...
Nke a bụ ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na ị na - eme ihe na - adịghị mma banyere onwe gị
bryanekobe	 Mee 17, 2021 0
Nke a bụ ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na ị na - eme ihe ọjọọ banyere onwe gị Ọ bụrụ na ị na - eme ihe ọjọọ banyere onwe gị, anyị ga - enyere gị aka inwe mmetụta ka mma. Nkwenye onwe onye bụ isiokwu na-emetụta onye ọ bụla. Ọ bụ n'ezie ọrụ anyị kwesịrị ...
Gịnị bụ Ọrịa Onye Nzọpụta? Ele nke azịza ebe a!
Gịnị bụ Ọrịa Onye Nzọpụta? Ele nke azịza ebe a! Gịnị bụ Ọrịa Onye Nzọpụta? Ele nke azịza ebe a! May nwere ike ịnụtụbeghị ya, mana ọrịa nzọpụta dị ọtụtụ ...
Garoua: 6247 vial ogwu kpochapuru n'ihi ike ike
TELES RELAY	 Mee 14, 2021 0
Ọnọdụ nke na-emepụta ụkọ atụmatụ e mere atụmatụ na ihe karịrị 20 nde FCFA. Ugboro ugboro nke ọkụ eletrik ruo ọtụtụ ọnwa na mpaghara ugwu na-emebi azụmahịa na ezinụlọ. Ihe…
1 2 3 ... 69 esote